Caalamka, 10 January 2016
Axad 10 January 2016
Mexico: El Chapo oo Mar Kale Xabsiga la Dhigay
Saraakiisha Mexico ayaa Jimcihii shalay mar kale xabsiga u taxaabay Joaquin Guzman oo lagu naaneyso El Chapo. Mr. Guzman oo ah ganacsade weyn oo dhinaca daroogada ah ayaa xabsiga ka baxsaday 7 bilood ka hor.
Israel: 2 Falastiniyiin ah oo la Toogtay
Milteriga Israel ayaa sheegay in la toogtay laba Falastiiniyiin ah oo isku dayay inay tooriyeeyaan askar taagneyd bar kantarool oo ku taalla Daanta Galbeed.
Dowladda Germany ayaa sheegtay in qof kasta oo soo galooti ah oo dambigan lagu helo laga masaafurin doono dalka Germany.
Saraakiil ayaa Talaadadii soo saaray meydadka 36 ruux oo muhaajiriin ah, kuwaas oo ay ku jiraan caruur ku qaraqmay xeebaha dalka Turkiga kadib markii doonidii ay ku safrayeen kula qallibantay badda u dhaxeysa Giriigga iyo Turkiga.
Bahrain ayaa qaaday tallaabo la mid ah tan dalka ay xulufada yihiin ee Saudi Arabia oo axaddii xiriirka u jaray Iran.
Iran ayaa sheegtay in go’aanka Sacuudiga uusan dareenka ka weecineynin “Qaladkii weynaa” oo ay gashay, ee ay ku qaarijisay Sheikh Nimr.
Dowladda Sweden ayaa dadka kasoo gudbaya xuduudda Denmark weydiin doonta kaarar aqoonsi, si ay uga hortagto qul-qulka muhaajiriinta.